कागती खेती कसरी गर्ने ? जानी राखौं महत्वपूर्ण टिप्सहरु – Nayadhar
बुधबार, जेठ २९, २०७६ | २०:१४:२५ |
काठमाडौं । कृषकले पछिल्लो समय कागतिको व्यवसायिक रुपमा खेती गर्न थालेकाछन् । कागती रसमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले स्वास्थ्यको लागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण फल हो । यसैले स्वास्थ्य उपयोगि कागती खेती कहिले कुन महिनामा कसरी गर्ने भनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले तयार पारको केहीे महत्वपूर्ण टिप्सहरु निम्न प्रकारका छन् ।१- कागतीको विरुवा रोप्न के कस्तो तयारी गर्नु पर्छ ?
कागती सम्बन्धी विज्ञको सल्लाह लिई रेखाङ्कन गरि विरुवा रोप्नु भन्दा २–३ महिना पहिले नै २–३ घनफिटको खाल्डो खन्ने ।२- खाडल कहिले भर्ने र विरुवा कहिले रोप्ने ?
३- खाडल कहिले खन्ने?
४- कागती खेतीको लागी कस्तो जग्गाको छनौट गर्नु पर्छ?
५- कागतीमा लाग्ने रोगहरु नियन्त्रणका उपाय के हो?
६- कागतीमा लाग्ने रोगहरु कुन कुन हुन?
७- कागतीको मिलिबग किरा कसरी नियन्त्रण गर्ने?
८-कागतीको लाही र सिट्रस सिल्ला किरा कसरी नियन्त्रण गर्ने?
९- कागतीको कतले किरा कसरी नियन्त्रण गर्ने?
१०- कागतीमा लाग्ने किरा ठुलो पुतली र पातको झिंगालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने?
११- कागतीमा लाग्ने मुख्य मुख्य किराहरु कुन कुन हुन?
१२- कागतीको फल टिप्न उपयुक्त समय के हो?
१३- कागती विरुवालाई काँटछाँट गर्ने विधि के हो?
१४- मलखाद दिने तरिका के हो?
१५- वोट हुर्कि सकेपछि मलखाद कतिको हाल्नु पर्छ?
१६- सिंचाईको लागी श्रोतमा पानी कम छ भने कसरी व्यवस्था मिलाउने?
१७- कागती बगैंचामा सिंचाईको आवश्यकता कहिले पर्छ?
१८- कागतीको विरुवा एक पटक रोपेपछि कति बर्षसम्म फल दिई रहन्छ?
१९- कागतीको कस्तो जात छनौट गर्नु पर्छ?
२०- मलखादको प्रयोग कति गर्नु पर्छ?
२१- कागतीको वोट रोपने दुरी कति राख्नु पर्ने हो?
२२- कागती खेतीको लागी कस्तो माटोको आवश्यक पर्दछ?
२३) कागतीलाई सिचाई गर्न आवश्यक हुन्छ?
२४) कागती खेतीको लागी कस्तो हावापानी चाहिन्छ?
२५- कस्तो कस्तो रोगमा यो फल उपयोगी हुन्छ?
२६- कागती फलको महत्व के हो?